केकी अधिकारीको जीवन : घर छिर्ने बित्तिकै रिमोट हातमा, टिभी अन - Ratopati
हिट एन्ड फिट अभिनेत्री हुन्– केकी अधिकारी । नृत्यकलामा निपुण उनी चलचित्र, म्युजिक भिडियो, विज्ञापन चलचित्रलगायत चारैतिर छाउन सफल छिन् । उनी सबै निर्माता, निर्देशकको रोजाइकी हिरोइन् पनि हुन् । त्यसैले होला उनलाई अभिनयमा भ्याइ नभ्याइ छ । केही समय अगाडि दीपेन्द्र लामाको ‘घामपानी’को अभिनय सपन्न गरेकी उनी अहिले दिवाकर भट्टराईको ‘ऐश्वर्या’को छायाङ्कनमा छिन् । रिल लाइफमा धेरैसँग रोमान्स गरेकी केकी रियल लाइफमा भने सिङ्गल छिन् । तत्कालै जोडी बाँध्ने योजना पनि नरहेको बताउने ब्युटिफुल अभिनेत्री केकीसँग रातोपाटीको मेरो जीवनका लागि कुवेर गिरीले गरेको कुराकानी :
मनपर्ने खाना थकाली दालभात नै हो । यसमा टिम्बुरको अचार रोजाइको डिक्स । तरकारीमा इस्कुस र लौका कहिलै पनि मनपरेनन् र पर्दैन पनि होला । अफिस त छैन मेरो । त्यसैले मिटिङ, भेटघाट, अन्तर्वार्तालगायत काम रेस्टुरेन्टमै ठीक लाग्छ । काठमाडौँका प्रायः सबै रेस्टुरेन्ट पुगेकी छु भन्दा फरक नपर्ला । मलाई चटपटे स्टाइलले साँधेको जुनै खानेकुरा पनि मीठो लाग्छ । हरेक चीज पकाउन आउँछ । नजानेको भन्ने केही छैन । तर मीठो बनाउँन सक्दिनँ । मीठो बनाउँने भनेको चिया मात्रै होला ।
फेसनमा धेरै जानकार छुइनँ । जिन्स पाइन्ट र टप्स पहिरन बेटर लाग्छ । लगाउन सजिलो पनि । फर्मल कार्यक्रममा जानुपर्दा सारी रोज्छु । गाउन पनि लगाउने गरेकी छु । कालो र रातो मेरो फेसनको फेबरेट कलर हुन् । फेसनका लागि धेरै खर्चालु पनि छैन । लोभी पनि होइन है । आफूले कमाएको घर परिवारमा पनि खर्च गर्नुपर्ने भएकाले पोसाकमा आवश्यक परेको हेरेर खर्च गर्छु । विदेशी कार्यक्रम धेरै पर्ने भएकाले प्रायः पहिरन उतैबाट ल्याउँछु । देशमा आयोजना हुने विभिन्न सभासमारोहका लागि डिजाइनर हाउसबाट लिन्छु । काम सकिएपछि फिर्ता गर्न पनि मिल्यो ।
एक्सरसाइजका लागि घरमै ट्रेडमिल त छ तर त्यसमा भन्दा जिममा नै रमाइलो लाग्छ । त्यहाँ सबैले गरेको देख्दा बेग्लै इनर्जी आउँछ ।
फिटनेसमा सचेत छु । बिहान उठ्ने बितिकै फेसियल एक्सर साइज गर्छु । विषेशगरी आँखा, गालाका लागि । सुटिङ भएको बेलामा जिम जान्नँ । नभएको बेला दैनिकको रुटिङ यो नै हो । जिममा जुम्बालगायतका एक्सरसाइज प्रिय लाग्छन् । योगा पनि ठोग्ने गरेकी छु । दैनिक दुई तीन घन्टा फिटनेसमा बित्छ । डाइटिङ रुचाउँदिन । मन लागेजति खान्छु । बदलामा एक्सरसाइज गर्छु बरु । हेल्दीफुड मनपर्छ । चिल्लो, पिरो लगायतको खाने कुरामा नो इन्ट्रेस्ट । एक्सरसाइजका लागि घरमै ट्रेडमिल त छ तर त्यसमा भन्दा जिममा नै रमाइलो लाग्छ । त्यहाँ सबैले गरेको देख्दा बेग्लै इनर्जी आउँछ ।
मेरो रुचिको विषय अध्यायन पनि हो । सबै खालका पुस्तक मनपर्छ । नेपाली लेखकमा बुद्धि सागर र विदेशीमा मुराकामी फेबरेट लेखक हुन् । आर्टिकल पनि लेख्ने गरेकी छु । केही दिन अगाडि गोविन्द केसीका लागि लेखेकी थिएँ । घरमा धेरै पुस्तक सङ्कलन छन् । बुबाको पालादेखिकै चलन हो यो । मेरो बुबा केही कामले बाहिर निस्किनुभयो भने पनि दुईवटा किताब बोकेर मात्र फर्कनुहुन्छ । यही कारणले पनि घरमा सबैको पढ्ने बानी छ ।
कामले नै घुमाउँछ मलाई । व्यक्तिगत घुम्न त्यति रुचि राख्दिनँ । फुर्सदको समय घरमै अध्यायन गर्न रुचाउँछु । ७५ जिल्लाको यो देश आधा जति घुमिसकेँ होला । विदेशको कुरा गर्दा अस्टे«लिया, अमेरिका, गल्फ राष्ट्रहरु, युरोपियन राष्ट्रहरुलगायत धेरै छन् । घुम्नका लागि फ्रान्स नै बेस्ट लाग्यो ।
फुर्सद भन्ने आफ्नो साइकोलोजिकल कुरा हो जस्तो लाग्छ मलाई । फुर्सद छैन भनेर बस्यो भने केही गर्न भ्याइँदैन । काम गर्न अगाडि सर्यो भने धेरै गर्न भ्याइन्छ ।
हाम्रो काम नै त्यस्तो । फुर्सद भन्ने नै हुँदैन र हुन्छ पनि । सुटिङ भयो भने सातै दिन पनि हुन्छ । फुर्सद भन्ने आफ्नो साइकोलोजिकल कुरा हो जस्तो लाग्छ मलाई । फुर्सद छैन भनेर बस्यो भने केही गर्न भ्याइँदैन । काम गर्न अगाडि सर्यो भने धेरै गर्न भ्याइन्छ । सुटिङमा बिजी भइन्छ । फुर्सदको समय परिवारसँग बिताउँछु । चाडपर्वमा विदेशी कार्यक्रम, विभिन्न फेस्टिबल भए पनि फुर्सद मिलाउँछु ।
फुटबल हेर्न मनपर्छ नखेले पनि । टेबलटेनिस खेल्न मनपर्छ । क्रिकेट कहिलै बुझिनँ । बुझ्ने कोसिस गरिरहेकी हुन्छु । सानैमा साथी साथीसँगको म्याचका लागि फुटबल खेलेकी थिए । स्कुलमा धेरै खेलिन्थ्यो । कराँते पनि अनिवार्य थियो । त्यो पनि सिकेकी छु । फुटबलर मेसी प्रिय लाग्छ । उनकै कारणले फुटबलको फ्यान म ।
यो महिनाबाट जियोनी मोबाइल लिएकी छु । बजार मूल्य २६ हजार मात्र । मोबाइल फेरिरहन रुचाउँदिन । किनभने धेरै कन्ट्याक नम्बर राखिएको हुन्छ । स्टोर गरिएको महत्वपूर्ण नोटहरु हुन्छन् । आफूले चलाइरहेको मोबाइल मानिसझैँ मनको नजिक बसेको हुन्छ । धेरै चेन्ज गर्न सकिन्न । नबिग्रेसम्म र नफुटेसम्म गर्दिनँ पनि । मोबाइलमा चाहिनेभन्दा बढी एप्स राखेकी छुइनँ । ह्याङ हुने डरले । फोन र म्यासेन्जर धेरै चलाउँछु । फेसबुक, ट्विटर र इस्टाग्राम साथी मेरा । गेम भने अहिलेसम्म खेलेकी छैन ।
टेलिभिजन हेर्न रुचाउने मानिस हुँ । पहिले त बिहानदेखि बेलुकासम्म टिभी अगाडि बसेर बिताउँथे । अचेल कम भएको छ सो क्रम । टेलिभिजनमा विशेषतः टक्क सो, रियालटी सो र रमाइला सो नै मनपर्छ । मेरो घरमा पुरानो ब्रान्डको टिभी छ । २१ इन्चको होला । सुटिङ अथावा बाहिरबाट भित्र छिर्ने बित्तिकै रिमोट हातमा टिभी अन । अनि मात्र मेकअफ पुच्छ्ने, ड्रेस फेर्नेलगायतका कार्य गर्छु । टिभी कलाकारमा दीपक र दीपा नै मनपर्छ ।
चलचित्र हेर्नेमा नम्बर वान म । फुर्सद भएसम्म हलमा लागेका चलचित्र छुटाउँदिन । हलमा नलागेका पनि हेर्छु । विभिन्न भाषाका, देशका चलचित्र इन्टरनेटबाट डाउनलोड गरेर ।
चलचित्र हेर्नेमा नम्बर वान म । फुर्सद भएसम्म हलमा लागेका चलचित्र छुटाउँदिन । हलमा नलागेका पनि हेर्छु । विभिन्न भाषाका, देशका चलचित्र इन्टरनेटबाट डाउनलोड गरेर । आफूले हेरेको याद भएको पहिलो चलचित्र कन्यादान हो । भर्खरै हेरेको चलचित्र ‘बिग एप्पल’ भन्ने हो । यो चाइनिज चलचित्र हो । यसले हजुरबुबा र नातिनीको सम्बन्ध देखाएको छ । आफूले अभिनय गरेको चलचित्र परिवारसँगै हेर्छु । एक्लै हेरेका, चित्त बुझेका चलचित्र परिवारलाई पनि हेराउँछु र हेर्न आग्रह गर्छु ।
रोग नभएका मानिस नै हुँदैन होलान् । रोग सबैलाई हुन्छ । मानिस न हो फिजिकल्ली पनि केही न केही रोग हुन्छ । हाम्रो देशको अवस्थाले धेरैलाई रोगी बनाएको छ । मेन्टल्ली प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । यो अवस्थामा रहेकी मलाई केही न केही रोग भएको होला । आफैलाई थाहा नभएको पनि हुनसक्छ । एक पटक सुटिङको बेलामा मेरो एक्सिडेन्ट भएको थियो । त्यो बेला लागेको खुट्टामा पानी जम्ने रोग अहिले पनि समस्याको रुपमा छ ।
मलाई शुद्ध नेपाली बोल्न मनपर्छ । अरुले पनि जुनै भाषा बोले पनि शुद्ध बोलोस् भन्ने मेरो धारणा छ ।
मलाई शुद्ध नेपाली बोल्न मनपर्छ । अरुले पनि जुनै भाषा बोले पनि शुद्ध बोलोस् भन्ने मेरो धारणा छ । हामी न त शुद्धसँग नेपालीमा बोल्न सक्छौँ न विदेशी भाषामा नै । हामीमा मिक्स गर्ने बानी परिसकेको छ । राजेश हमाल दाइको भाषा प्रफेक्ट लाग्छ अरुको भन्दा । उहाँ जुन भाषामा कुरा गर्नु हुन्छ । त्यो नै पर्फेक्ट बोल्नुहुन्छ ।
कहिलै पनि गरेकी छुइनँ र गर्दिनँ पनि । घरमा पनि कसैको बानी छैन । यसलाई अरुले सजाएर राखेको देख्दा मलाई अचम्म लाग्छ । किन सजाउँछन्, के हुन्छ सजाएर भन्ने प्रश्न मनमा अनेक आउँछन् । यसको ठाउँमा परफ्युम सजाएर राख्ने गरेकी छु । यही ठीक लाग्छ । घडीहरुको कलेक्सन पनि छ मसँग ।
जीवनमा धेरै भूल गरेकी छु । जानी नजानी गरेका कति होलान् कति । मेरो ठूलो गल्ती यही हो भन्ने छैन ।
सङ्गीत प्रेमी व्याक्ति म । सङ्गीत मन नपराउने व्याक्ति कठोर हुन्छन् भन्ने लाग्छ । त्यो व्याक्तिको मन नै हुँदैन, जो सङ्गीत रुचाउँदैन । म म्युजिक लम्पट हुँ । अन्जु पन्त, मेलिना राई, राजेशपायल राई, रामकृष्ण ढकाल मनपर्ने गायक गायिका । पुराना पुस्तामा सबै राम्रो लाग्छ । सबै खालका गीत सुन्छु । बच्चु कैलास चाहिँ धेरै मनपर्ने गायक हुन् । मैले धेरै म्युजिक भिडियो अभिनय गरेकी छु । त्यसैले पनि गीत गुन गुनाउँछु । यो बानी परिसकेको छ । भिडियो लिब्बसिङ्ग दिँदा ।
जीवनमा धेरै भूल गरेकी छु । जानी नजानी गरेका कति होलान् कति । मेरो ठूलो गल्ती यही हो भन्ने छैन । गल्ती गरेपछि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष त्यसको सजाय अवश्य पाइन्छ । कुनै न कुनै रुपमा । पापको फल मरेपछि भोगिन्छ भन्नेहरु पनि छन् अहिले । मलाई त्यस्तो लाग्दैन । पाप र पुण्यको फल भोग्ने अहिले नै हो । एक चोटि म साथीहरुसँग आउटिङमा गएकी थिएँ । फर्किन ढिलो भयो । ६ बजे फर्किनुपर्नेमा ९ बज्यो । कारण धेरै थिए । मोबाइल हातमा नभएकोले घरमा खबर गर्न पनि पाइन । घरमा फर्किने बित्तिकै बुबाले धेरै गाली गर्नुभयो । गल्तीविनाको सजाए अहिलेसम्म पाएकी छैन ।
साढे दुई तलेको घरमा बसिन्छ आरामले अहिले । बुबाआमाले नै बनाउनु भएको । मात्र चार पाँच वर्ष अगाडि । डिजाइन पनि राम्रै छ । वास्तुशास्त्र मिलाएर बनाइएको हो । खर्च कति लाग्यो होला । त्यो केही थाहा छैन ।
सौन्दर्यमा म सेचत छु । तर कपालको ख्याल नगर्नेमा पर्छु । त्यसैले पनि मेरो कपाल बिग्रिएर छोटो भएको छ । सुटिङको क्रममा धेरै केमिकल प्रयोग गरिन्छ ।
मिन राशीकी म । ग्रह दशा केही छैन । धेरै हेराउने गर्दिनँ । कसैले जाऊँ भनेमा नाइँ पनि भन्दिनँ । आफ्नो भविष्य के रहेछ ? के चलिरहेको छ ? त्यो सुन्न मनपर्छ । विश्वास पनि लाग्छ । त्योभन्दा बढी कर्ममा विश्वास गर्छु । ज्योतिषको भरमा परियो भने डुबिन्छ । एक पटक सुटिङको क्रममा ठूलो दुर्घटना भएको थियो । त्यो बेला ग्रहशान्ति पनि गरियो ।
सौन्दर्यमा म सेचत छु । तर कपालको ख्याल नगर्नेमा पर्छु । त्यसैले पनि मेरो कपाल बिग्रिएर छोटो भएको छ । सुटिङको क्रममा धेरै केमिकल प्रयोग गरिन्छ । चाहेर पनि त्यसलाई रिजेक्ट गर्न सकिन्न । यसले मेरो सौन्दर्यमा असर पार्दै गएको छ । तर अहिले म आफ्नो सौन्दर्यलाई लिएर सचेत छु । उमेर बढ्दै जाँदा यसलाई झनै केयर गर्नुपर्ने रहेछ । कपालमा तेल प्रयोग गर्छु । महिनाको एक पटक फेसियल गर्छु । मसाज कहिले काहीँ जान्छु । तीन चार दिन लगातार फाइटको सुटिङ पर्यो भने शरीर दुख्छ के गर्ने । यो समयमा आमालाई दुःख दिनु पनि त भएन नि ।
सपना मेरा धेरै थिए र छन् । फोन मेकिङ पढ्ने । यो मेरो पहिलेकै सपना हो । त्यो पूरा गर्न भ्याएकी छैन । गर्ने इच्छा अझै छ । चलचित्र बनाउने अर्काे सपना हो । राजनीतितिर भने केही सपना देखेकी छैन । तर यसबाट टाढा भाग्न सकिन्न । सीधै राजनीतिमा लाग्नु मलाई राम्रो हो जस्तो लाग्छ । युवापुस्ताले यसमा चासो दिनुपर्छ । नेपालमा गरिबी कम गराउन केही गर्ने पनि इच्छा छ । हेरौँ समयले के गराउँछ ।